The Merit 715T Kunyanya treadmill inoita kuti zvive nyore kutanga chirongwa chekudzidzira-kumba. Iyo 715T Plus yekutsika yakashongedzwa neepamusoro-mhando 2.5 THP (1.5 CHP) mota yekutyaira. Iyo yekutsika inoita kuti zvive nyore kumisikidza yako yekurovedza kumhanya. Unogona kuenda kubva ku0 kusvika gumi mamaira paawa. Zviri nyore kutarisa kufambira mberi kwako kwekushandira nekutenda kune matatu-hwindo LED kuratidza, iyo inoteedzera yako nguva, kureba, kumhanya, macalorie akatsva, uye zvimwe.
MMAWarehouse clearance Chiitiko - Sevha Kusvikira ku50% Bvisa clearance